10 Nooc Oo Kamid Ah Ololeyaal Email Kicin Ah Oo Ay Tahay Inaad Hirgaliso | Martech Zone
Markaan la shaqeynayay dhowr iibiye email, marwalba waan layaabay la'aanta horay loo qorsheeyay, wax ku ool ah kiciyay ololeyaal emayl xisaabaadka marka la hirgaliyo. Haddii aad tahay barxad akhrinaysa tan - waa inaad ololahan u diyaar u noqotaa inaad ku dhex socoto nidaamkaaga. Haddii aad tahay suuqgee email, waa inaad ka shaqeyneysaa inaad ku darto noocyo badan oo ka mid ah emayllada kiciyay ee aad awoodid si aad u kordhiso kaqeybgalka, helitaanka, haynta iyo fursadaha kor u kaca.
Suuqleyda aan isticmaalin ololeyaasha emayl ee kiciyay imika si dhab ah ayaa loo waayey. Xog cusub oo ka soo baxday Haa Lifecycle Marketing warbixinteedii ugu dambaysay ee tilmaanta waxay muujineysaa in halka kiciyayaashu ay ku sii kordhayaan korsashada, inta badan suuqleyda aysan ka faa'iideysan xeeladdan fudud. Kiciyeyaashu waxay sameeyeen uun ka yar 7% wadarta ololaha suuqleyda la diray wali waxay abuureen ku dhowaad 5 jeer heerka gujinta, ku dhowaad laba jibaar heerka furan isla markaana ku dhowaad saddex jibaar heerka CTO.
Ka Degso Haa Warbixinta Suuq-geynta Nolosha
E-mayllada la kiciyay waa emayllada laga soo bilaabo akhbaaraha macaamilkiisa, muuqaalkiisa, ama dookhiisa. Tani way ka duwan tahay kuwa caadiga ah, ololayaasha farriimaha badan ee lagu fuliyo taariikhda ama waqtiga horay loo cayimay ee astaanta.
Sababtoo ah ololeyaasha emayl ee kiciyay ayaa dhaqan ahaan bartilmaameed u ah oo ku habboon waqtiga macaamiisha ay filayaan iyaga, waxay gaarayaan natiijooyin ka sarreeya marka loo barbar dhigo ganacsiga sida caadiga ah (BAU) ololeyaasha emaylka sida joornaalada. Ma jiro kanaal ka wanaagsan oo si ballaadhan loo aqbalay.
Celceliska qiimaha dalabka (AOV) ee emayllada tafaariiqda ee aan kicinin wuxuu ahaa $ 56.34 marka loo barbar dhigo $ 61.54 fariimaha kiciyay
Markaad si gaar ah u eegayso ololeyaasha kiciyay, emayllada Sabtida ee loo diray Q1 waxay heleen 8% heerka beddelashada, ku dhowaad labalaab celceliska Sabtida
In kasta oo 65% suuqleyda ay qaateen ololeyaal Soo-dhaweyn Q1 2016, tiradaas waxay ku korodhay 7% sanadkii la soo dhaafay
Waxqabadka Hore - Macaamiisha hawlgeliyay laakiin aan isla markiiba hawl galin ayaa lagu sasabi karaa inay ku sameeyaan emaylladan.